မွန်မွန်ယိုကို: BC မှ Finance Assistant အလုပ်ခေါ်နေသည်။
BC မှ Finance Assistant အလုပ်ခေါ်နေသည်။
JOB VACANCY AT BRITISH COUNCIL
The British Council in Myanmar is recruitingaFinance Assistant (Pay band: J - min USD 558) for its Yangon office.
To assist Finance Manager in day to day finance operations and provide support to other staff members with financial services and advice they need in order to ensure an efficient, secure and appropriately controlled financial environment.
We will be looking for evidences of determination to deliver the best work in order to meet commitments, willingly support others who are dealing with difficulties or problems in their work and put extra energy
into dealing with obstacles or setbacks.
Basic understanding of accruals entries and their impact on profit and loss account and balance sheet. Able to reconcileacontrol account.
Substantial evidence of skills in using Microsoft Office (Outlook, Word, Spreadsheet and Database).
Good communication skills in English and Myanmar.
Closing date - 16 March 2012
credit to Myanmar-Network
BC က အလုပ်ခေါ်တာတွေ.လို. စိတ်ဝင်စားသူတွေလျှောက်လုို.ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လခကလည်း မဆိုးဘူး တစ်ခါတစ်ရံ မှ ဒီလိုpost မျိုးက ခေါ်တာဆုိုတော. သက်ဆုိုင်တဲ.သူတွေ လျှောက်လို.ရအောင်လို. မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာ ကြပါစေ။
လျှောက်ကြည့်အုံးမှပဲ...ဟိဟိ..မဲပေးလို့ ကျေးဇူးပါ မမမွန်မေးနဲ့ လျှောက်လို့ မရဘူးလား ...အဟင့်...
Mon Mon Yo KoPromote Your Page Too
blog လာလည်သူမိတ်ဆွေများ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာကြပါစေ။ အမှတ်တရ အတွေ.အကြုံများနဲ. ဗဟုသုတများကို ဖြန်.ဝေ သိမ်းဆည်းလိုတဲ.အတွက် စာရေးဖြစ်ပါတယ်။よこそ。အမြဲကြိုဆုိုပါတယ်။
“ ကိုယ့်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းတာလဲ ရှိတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ကိုယ်ကောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ကိုယ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အကောင်းတွေတစ်ထပ်တည်းကျရင် ပိုကောင်းမှာပေါ့။ပြောသမျှ စကား တရားဖြစ်ပါစေ။ကိုယ်ကပဲ ပြောပြော၊သူများပြောတာပဲကြားကြား...တရားဖြစ်ဖို့ စကားတိုင်းကကူညီနေပါတယ်။ ”- အရှင်ဆေကိန္ဒ (ဓမ္မဒူတ)
ဒဏ်ရာပြဿနာဖြင့် ၂၀၁၃ကို ဗန်ပါစီ အဆုံးသတ်ရတော့မည်
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို အမှန်တကယ် ရှေ့ရှုစဉ်းစားလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင် တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးများအားလုံးကိုလည်း ပြန်လွှတ်ပေးစေချင် ...
Today Trade Market Rates (Second Half of 13 December 2013)
php.h: No such file or directory
Myanmar SEA Game Live stream!
Florida,Universal Studios တ​ခေါက်​....
နွေဦးတွင် ချယ်ရီဝေသောမြို့ ...
ရေစက်ချပြီးလှူက ကုသိုလ် သုံးမျိုးရ
တနေ့ တာ ကုသိုလ် ဝေမျှလိုသည် ။
မျက်ရည်ငှက်များ နားစေသတည်း ...
၀က်သားသရက်သီးသနပ်၊ ၀က်သားအချိုချက်၊ ကြက်မြစ်ကြက်သဲ၊ ချဉ်ပေါင်ဟင်းချို၊ ငရုတ်သီးထောင်း
I am လေပေါ
မြန်မာပြည်မှာကျင်းပနေသော Sea Game ဖွင့်ပွဲ
အခုကျင်းပနေတာကို တွေ့ ရမှာပါ
မေတ္တာရှင် ဖောင်ဒေးရှင်း စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း ရာသက်ပန်ငွေပဒေသာပင် အလှူရှင်များစာရင်း-
(မေတ္တာရှင် ဖောင်ဒေးရှင်း ၊စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်...
KEIO University တွင် ဒေါက်တာဘွဲ့တုိုက် ရိုက် တက်ရောက်လုိုသူတဦး မှ မေးလာသော မေးခွန်း အတွက် ပြန်ကြားချက် အပိုင်း (၁)
Question: လက်ရှိ အစိုးရဝန်ထမ်းအနေနဲ. တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပီး IT မေဂျာနဲ. မာစတာပြီးထားသူ တစ်ဦးက မေးခွန်းအချို.ကို အီးမေးလ်မှ တဆင့်မေးလာပါတယ်။မေးခွန်းများက - ...
ယနေ. ဂျပန်မှာ ဆောင်းဦးရောက်ပီ။
ပီးခဲ.တဲ.အပတ်တွေတုန်းက ရာသီဥတုပူနေခဲ.ပေမဲ. ဒီနေ.တော. သိသိသာသာကို အေးစပြုလာပီ။ အကြိုက်ဆုံးရာသီဥတုက ခုလို ၂၃နဲ. ၂၆ဒီဂရီစင်တီဂရ...
ဒီစာမျက်နှာလေးမှာ ဂျပန်နှင့်မြန်မာ သိသင့်တာလေးတွေအချင်းချင်းမျှဝေဖို့ရာ
မိတ်ဆွေအချို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းပြီး ဖန်တီးထားပ...
Myanmar Ahlin Newspaper
ယနေ. ဂျပန်မှာ ဆောင်းဦးရောက်ပီ။ ပီးခဲ.တဲ.အပတ်တွေတုန်းက ရာသီဥတုပူနေခဲ.ပေမဲ. ဒီနေ.တော. သိသိသာသာကို အေးစပြုလာပီ။ အကြိုက်ဆုံးရာသီဥတုက ခုလို ...
ဆလတ်ရွက် မဆလာ ကြက်ဥကြော် ........ငါးဥနဲ. ဒုံ ဒီနေ. ဂျပန်စာ စကားပြောသင်တန်းသွားစရာရှိတာ ကိုယ.်ဘာသာအကြောင်းပြပီး lab ကို မသွားဖြစ်တော.ဘူး။ အခါတိုင်းဆို များသောအားဖြင်. cam...
ချဉ်ငံစပ် ရေဘဝဲ ငပိသုပ်
ရေဘဝဲသုပ် ဟဲလို မွန်မွန်တုို. ဘလော.ပေါ်မတက်လာတာကြာပီနော်။ ဒီတစ်ခေါက် ဟင်းလျာက တော. ရေဘဝဲ ငပိသုပ် ပါ။ ဒီနေ.တော. မင်းလမ်း...
ဖေ.ဘွတ်တည်ထောင်သူ Facebook CEO Mark Zuckerberg က နိုင်ငံရေးနဲ. သက်ဆိုင်သော အဖွဲ.တစ်ခုကို ဖွဲ.စည်းလိုက်ပါတယ်။ ယခု တစ်လော အမေရိကန်မှာ hot...
လတ်တလော အလုပ်......နည်းပညာနယ်ပယ်ထဲက 5G ကိုစိတ်ဝင်စားသော ကျွန်မ
လွန်ခဲ.သော ရှစ်နှစ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်............ ခင်ပွန်းသည် မာစတာ စတက်တုန်းက 4G wireless communication ဆိုတာ သုတေသနလုပ်နေတဲ. researchers,p...
အောက်ကbox ထဲမှာemail လိပ်စာရိုက်ထားလိုက်ရင်ပို.စ်အသစ်တင်တုိုင်းemailဆီပို.ပေးပါလိမ့်မယ်။
Room (707), Building (C), Pearl Condominium, Kaba Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar. Tel: 95-9-8612151, 95-9-8613848
မွန်မွန်ယိုကို. Powered by Blogger.